कृषि Archives - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
काठमाडौं । धान फल्ने विश्वकै अग्लो ठाउँ भनेर चिनिन्छ, छुमचौर । पाताराशि गाउँपालिकाको यो गाउँमा काली मार्सी धान उत्पादन हुन्छ । यार्सा टिप्ने र धान रोप्ने समय सँगसँगै पर्दा पछिल्लो समय धान खेत बाँझै रहन्थ्यो । यसले काली मार्सी धानै लोप हुने अवस्था आयो । गाउँपालिकाले उपाय निकाल्यो–किसानका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम । एक दशकपछि यसपालि छुमचौर ज्युलो (फाँट) मा काली मार्सी...
हेर्नुहोस् यि युवा कृषक भाष्कर पंगेनीको पौरख ! सम्मान स्वरुप शेयर गरौँ ( फोटो)
गरीब छु तर पैसाको लागी आफ्नो पसिना परदेशको भुमीमा बगाएको छैन। बरु आफ्नै माटोमा पसिना मुछेर देशको समृद्धिको लागि सपना सजाएको छु। यो सपना पूरा गर्न प्रचुर मात्रामा दृणता अनि लगनका साथ परीश्रम नि गरेकै छु। निसन्देह सफल हुन कस्ले छेक्ला। मेरो देश साच्चै धनी छ, मेरो माटो साच्चै धनी छ भन्ने प्रमाणित गरेको दिन सानले भनीन्छ यो देशमा...
मकै बेचेरै मासिक ३५ हजार ! विदेश जानै पर्दैन
चितवन । देशभित्र सम्भावना नदेखेर विरक्तिँदै विदेशिने युवाको जमात ठूलो छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक लाग्ने लर्कोले नेपालीको विदेशमोह झल्काउँछ । तर, स्वेदशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने बर्गेल्ती उदाहरण पनि छन्, हाम्रै वरिपरि । नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाका–८,थुम्सीका स्थानीय यस्तै गतिला उदाहरण हुन् । यहाँका ८० स्थानीय समाजले झिनोमसिनो ठान्ने हरियो मकै बिक्री गरेर मासिक ३५ हजारभन्दा बढी कमाइरहेका...
कृषिबाटै करोडपति , गर्नेहरुलाई स्वदेशमै सबथोक छ
सुनसरी : कृषिबाट ‘खासै आम्दानी हुँदैन’ भन्ने धेरै भेटिन्छन्। ‘कृषिमा सम्भावना छैन’ भन्दै युवा खेतबारी बाँझै राखेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। धरान–४, वसन्तटारका कृष्ण राई भने कृषि पेसाबाटै करोडपति बनेका छन्। दुई बिघा आठ कठ्ठा जमिनमा २० भन्दा बढी प्रकारका तरकारी र फलफूलको खेती छ उनको। उनी मासिक तीन लाखभन्दा बढीको तरकारी बेच्छन्। उनको गोठमा १३ माउ गाई छन्। जसबाट दैनिक...
बाकेमा १ हजार बाख्रा मरे पनि कुनै रोग पत्ता लगाउन सकेनन चिकित्सकले
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका– ५ कम्दी गाउँमा फैलिएको अज्ञात रोगबाट एक हजारभन्दा बढी बाख्रा मरेका छन् । दैनिकजसो बाख्रा मर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । कम्दी गाउँका मात्रै एक हजारभन्दा बढी बाख्रा मरिसकेको वडाध्यक्ष पर्शुराम बुढाथोकीले जानकारी दिए । बाख्राको पेट फुल्ने, मुखबाट ¥याल छोड्ने, पातलो दिसा गर्ने ज्वरो आउने र मर्ने गरेको किसान सुकमाया बोहोराको भनाइ थियो । “बाख्रा पालेरै...
अर्गानिक तरकारी भन्दै बिक्रि
काठमाडौं, ७ मंसिर । कृषि फ्रेसले बल्खुको होलसेलमा खरिद गरेको तरकारी उपभोक्तालाई अर्गानिक भनी बिक्रि गर्दै आएको पाइएको छ । उसले आफ्नै फार्ममा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरेको दाबी गर्दै उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ । कृषि फ्रेसले आफ्नो फार्ममा उत्पादन गरेका तरकारी काठमाडौंका विभिन्न १४ पसल आउटलेट बाट गर्दै आईरहेको छ । कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भइरहेको कृषि फ्रेस...
दुई हजारको कोदो फल्ने बारीमा ६० हजारको सयपत्री
धादिङ – मध्य धादिङको होमस्टे गाउँको नामले चिनिने निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर –१, पात्लेमा व्यावसायिक सयपत्री फूल खेती गरिएको छ । आइतबार पत्रकारहरुको टोली गाएँ भन्ने ठाउँमा पुग्दा शेरबहादुर गुरुङ उहाँको परिवारसहित फूल टिपेर डोकोमा हाल्दै हुनुन्थ्यो । नजिकैका प्रेमबहादुर गुरुङ र लोकबहादुर गुरुङ पनि फूल टिपेर घरतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो । सामाजिक अगुवा शेरबहादुर दुई हजारको कोदो फलाउन कठिन...
बोधिचित : बोधि + चित यी दुई शब्दहरु मिलेर बनेको छ । जसको अर्थ बोधि अर्थात स्वच्छ बुद्धि र चित अर्थात मन । यसको समग्र अर्थ भन्नुपर्दा स्वच्छ सफा मन र बुद्धिको लागि यो माला बहुउपयोगी हुने बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको विश्वास मालाको जप गरेमा राम्रो लाभ हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । बोधिचित माला जति धेरै पुरानो हुँदैजान्छ, यसको रेखाहरुमा...
गोदावरीमा सुरू भयो पुष्प मेला
काठमाडाैं । गोदावरीमा फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सुरु भएको छ । फूलको व्यवसायिक विकास, बिस्तार तथा प्रबर्द्धन गर्ने उदेश्यले प्रतियोगिता अायोजना गरिएको हो । जावलाखेलको खेल मैदान, ललितपुरमा सुरु भएको प्रदर्शनीको प्रदेश नम्बर ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उदघाटन गरेका हुन् । प्रदर्शनीबाट पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धनका सम्वन्धमा समय अनुकूल पुष्पको जातीय विकास हुने र गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग...